Home » သတင်း » QYOU အသစ်သောမိတ်ဖက်နှင့်ပုံစံများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက်၎င်း၏အာရုံကိုတိုးပွားစေ
multiscreen ဖြန့်ဖြူးဘို့ QYOU မီဒီယာ, ပရီမီယံ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မှူး '' အကောင်းဆုံး-of က်ဘ် 'သည်ဗီဒီယို Tata က Sky နှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်၏အောင်မြင်မှုကိုအောက်ပါအိန္ဒိယအတွက်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးသူနှင့်ဒေသခံပရိသတ်တွေ၏အရသာဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်အိန္ဒိယအတွက်ထုတ်လွှင့်, cable နှင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ linear feed ကိုတစ်ဒေသတွင်းဗားရှင်း၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူသစ်ကိုအကြောင်းအရာမိတ်ဖက်ပါဝင်သည်။
အိန္ဒိယသည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်နှင့်တရုတ်အပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအဆင့်တစ်ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်တီဗီစျေးကွက်ရှိပါတယ်။ ဒေသတွင်း၌တီဗီစားသုံးမှုတိုးတက်မှု၏အများစုမှာမိုဘိုင်းနှင့်ဘရော့ဘန်းအားဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ ယင်း၏ programming ကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်း app နဲ့တီဗီရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်စာရင်းသွင်းသူရှိနိုင်ပါသည်အဘယ်မှာရှိတာတာက Sky နှင့်အတူအဆိုပါ QYOU ရဲ့မိတ်ဖက်၏အောင်မြင်မှုကိုအောက်ပါ, QYOU ယင်း၏မြှင့်တင်ရန်အတွက်ဒေသတွင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူမိတ်ဖက်တစ်ဦးစီးရီးလက်မှတ်ထိုးရန်ပေါ်သွားပြီ နောက်ထပ်ရှိနေခြင်း။
အဆိုပါမိတ်ဖက်ယဉ်ကျေးမှုစက်၎င်း၏ထီးအောက်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ရက်များအများအပြားနှင့်အတူအစွန်းနည်းပညာလုပ်ကြံသောအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီပါဝင်သည်; Desi Hip-Hop Inc မှ, တောင်အာရှဟစ်ဟော့ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ပလက်ဖောင်း; နှင့်ခေတ်ပြိုင်အိန္ဒိယလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုမှူး TheVibe ။ ဤအမိတ်ဖက်မှတဆင့်နှင့်ဒေသတွင်းအဘို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အကြောင်းအရာ curating အသုံးပြုပုံ QYOU မီဒီယာကု သ. မရသောနှင့်အိန္ဒိယကြည့်ရှုရန်အယူခံကြောင်းဒေသတွင်း programming ကို feature ပါလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယတွင်ဖောက်သည်အိန္ဒိယအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးဖို့အပြင်, QYOU င်း၏အခြားချန်နယ် Feeds နဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်း programming ကိုစအချို့ပြပွဲနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Curt Marvis, CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, QYOU မီဒီယာ says: "အိန္ဒိယအခုအချိန်မှာကမ္ဘာ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မိုဘိုင်းနှင့် multiscreen ကြည့်ရှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, အိန္ဒိယလူဦးရေရဲ့သုံးပုံတပုံဝန်းကျင်ကိုဖွဲ့စည်းသူကိုအထူးသဖြင့်အနှစ်တစ်ထောင်, တကယ်ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ convergence မောင်းနှင်နေသည်။ ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်-Up ထားတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုများပြားလှကျွန်တော်တို့ကိုအိန္ဒိယ၏ထူးခြားသောအသံနှင့်အရသာထင်ဟပ်ပိုဒေသတွင်းအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်အဘို့, ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖွဲ့ဟာယဉ်ကျေးမှုစက်, Desi Hip-Hop Inc ကိုနှင့် TheVibe နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားဒီစျေးကွက်အတွက် ပို. ပင်ခြေရာကိုရဖို့ရန်တာတာက Sky နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အပေါ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသည်။ "
ယဉ်ကျေးမှုစက်သမ္မတ, Tuhin Menon, ဖြည့်စွက်: "ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ပထမဦးဆုံးမီဒီယာအမှတ်တံဆိပ်များ၏အပြည့်အဝနယ်ပယ်ကိုစူးစမ်းဖို့ QYOU နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် - တမန်တော်အိန္ဒိယ, မျက်နှာမပျက်, Awesome ကိုငံပြာရည်, Viva နှင့်ချတ္တနီးထားပါ - သူတို့ရဲ့အတွင်းဝင်ရိုးစွန်းအနေအထားပျော်မွေ့အားလုံးသော သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစား။ ဒီမိတ်ဖက်တော်အားဖြင့်, USA တွင် TBD ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ကွန်ယက်၏ကြည့်ရှုအဖြစ် linear နှင့် VOD ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တကမ္ဘာလုံး QYOU ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲက subscriber များအား, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပထမဦးဆုံးပရိုဂရမ်းမင်း၏ယဉ်ကျေးမှုစက်ရဲ့မတူညီတည်ငြိမ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုပူးပေါင်းလာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း CM ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ဗီဒီယိုစက်ပလက်ဖောင်းနဲ့ကျယ်ပြန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်လမ်းခင်းပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "နောက်ထပ်ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထွက်တည်ဆောက်ခြင်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ cable ကို ပြတိုက် အိႏၵိယ linear multiscreen QYOU မီဒီယာ ရေတိုပုံစံအကြောင်းအရာ တာတာက Sky TV တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-13
ယခင်: စာရေးသူ / အယ်ဒီတာ
နောက်တစ်ခု: GLOOKAST IBC မှာ Dynamic စားသုံးမိဖွင့်မည်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "QYOU အသစ်သောမိတ်ဖက်နှင့်ပုံစံများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက်၎င်း၏အာရုံကိုတိုးပွားစေ" ။ http://www.broadcastbeat.com/qyou-increases-its-focus-in-india-with-new-partnerships-and-formats/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။